Tarisa chako chemahara chengetedzo usati wasimudzira kune macOS Big Sur | Ndinobva mac
Toni Cortes | | macOS Huru Sur
Bug yakakosha yakangoonekwa nevashandisi vakati wandei vane matambudziko ekuvandudza Mac yavo ku macOS Big Sur. Zvinoitika kuti kana uchitanga maitiro ekuvandudza, iyo system haina kutarisa kana paine yakakwana yemahara nzvimbo pane rakaomarara dhisiki kuti uite maitiro aya.
Kubva ipapo unogona kutofungidzira kusviba kungave kuri kuti pakati pekumisikidza Mac inopera kunze kwekuchengetera kunowanikwa, uyezve, ikozvino "kwete kumberi, kana kumashure". Saka nepo Apple isingagadzirise, ita shuwa kuti iwe une nzvimbo yemahara pane yako Mac's hard drive usati wagadzirisa kune macOS Big Sur tanga.
macOS Huru Sur yakaburitswa zviri pamutemo kune vese vashandisi munaNovember gore rapfuura, uye kubvira ipapo pakave nezvakawandisa zvine hungwaru kugadziridza kwegadziri kugadzirisa tweaks uye kugadzirisa kwese. Nekudaro, Big Sur ichine dambudziko rakakomba iro rinogona kukonzeresa kurasikirwa kwe data kana vashandisi vaedza kukwidziridza Mac kuenda ku macOS Big Sur isina yakakwana inochengetwa.
Mushure mekuona kunyunyuta kwakati wandei kubva kune vashandisi pawebhusaiti yako Mr. Macintosh yakawana kuti macOS Big Sur inosimudza haitarise kana iyo yekuchengetera mukati kweMac ine yakakwana nzvimbo yemahara yekuita iyo yekuvandudza. Sezvo sisitimu inotanga iyo yekuvandudza maitiro, yako Mac Inoramba yakavharwa uye iyo data yarinogara inogona kukuvara zvachose.
Apple inoti kusimudzira kune macOS Big Sur kekutanga inoda kanenge 35,5 GB yekuchengetera kunowanikwa, uye izvi hazvisanganise macOS Big Sur 13GB inosimudza. Nehurombo, kunyangwe kana Mac yako isina 35,5GB yekuchengetera iripo, macOS ichaedza kuisa iyo Big Sur yekuvandudza, uye ndipo panouya dambudziko.
Kana iwe ukagadzirisa yako iripo MacOS Big Sur kune itsva vhezheni, hapana dambudziko
Kana pasina nzvimbo yakakwana, iyo yekuvandudza maitiro inoita kunge inoshanda mushe, asi kana kumisikidza kwapera, meseji 'A mhosho paunenge uchigadzirira software yekuvandudza. '
Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, iyo Mac haichatangi. Mr. Macintosh inosimbisa kuti iyi bug inokanganisa macOS Big Sur 11.2 simaki uye kunyangwe iyo macOS Big Sur 11.3 beta installer. Panguva imwecheteyo, izvi hazvikanganise zvigadziriso zveOTA kubva kuBig Sur kumisikidzwa kune imwe vhezheni (senge kusimudzira kubva macOS 11.1 kusvika macOS 11.2). Tsaona inongoitika kana iwe ukaisa macOS Big Sur kekutanga.
Kana iwe une backup ye data rako, unogona kungodzima iyo diski rese uye kuisazve macOS. Nekudaro, kupora data pasina backup kungave kwakaoma kwazvo.
Con FileVault inogoneswa, iwe unofanirwa kubatanidza Mac yako kune imwe Mac kuburikidza neakananga dhisiki modhi kuti uwane mafaera ako kumashure. Kana FileVault isina kubvumidzwa paMac yako, unogona kuedza kudzima mafaera uchishandisa Terminal application muMacOS Kudzoreredza, izvo zvinobvumidza macOS kupedzisa maitiro ekuvandudza zvinobudirira.
Apple haina kutaura nezveichi chipfuva kusvika parizvino, asi zvinofungidzirwa kuti ichakurumidza kugadzirisa nekuburitswa kwekupedzisira kweiyo nyowani macOS Big Sur 11.3 vhezheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Huru Sur » Tarisa chako chemahara chengetedzo usati wasimudzira kune macOS Big Sur kekutanga
Nyowani vhezheni ye macOS Big Sur 11.2.1 yakaburitswa zviri pamutemo kugadzirisa midzi kupinda